Tontosa ny alarobia 21 jolay 2021 tao amin'ny Lapam-panjakana Iavoloha ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa sy famatsiam-bola ireo tetikasa miisa efatra miaraka amin'ny Banky Iraisam-pirenena. Mitentina 490 tapitrisa dolara izany famatsiam-bola izany, izay tafiditra ao anatin’ny teti-bola mitentina 1,1 miliara dolara natokan’ny vondron’ny Banky Iraisam-pirenena ho an’i Madagasikara amin’ity taona 2021 ity, izay voafaritra ao anatin’ny IDA19. Nampatsiahivin’ny Filoha Andry Rajoelina fa raha nihaona tamin’ny Tale Jeneralin’ny Banky Iraisam-pirenena ny tenany, nandritra ny fihaonambe tao Abidjan farany teo, dia niombon-kevitra ny roa tonta fa ny firenena tsirairay no tsy maintsy mamaritra ny laharam-pahamehany sy mandroso ny paikadim-pampandrosoana entiny. Etsy ankilany kosa, ireo mpamatsy vola dia mandroso soso-kevitra amin’ireo firenena ireo sy mampifanaraka ny famatsiam-bola entin’izy ireo hanatanterahana ireo paikady izay napetraka ireo.
Notanterahana tao amin’ny Sofitel Hôtel Ivoire any Abidjan, Côte d’Ivoire, ny fihaonana antampon’ny Banky Iraisampirenena ho fandrafetana ny sorabola andiany faha-20 ampiasain’ny Fikambanana iraisampirenena momba ny fampandrosoana na IDA20. Naharitra ora telo ity fihaonana, izay nanomboka tamin’ny 1 ora tolak’andro aty amintsika ity. Nandray anjara amin’ity fihaonana ity ny filohan’ireto firenena afrikana voatanisa manaraka ireto : Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Mauritanie, Madagascar, Mozambique, Niger, Nigéria, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Togo ary Ouganda. Anisan’ireo any an-toerana hatry ny omaly, noho izany, ny filoha Andry Rajoelina. Natao hitsinjovana ny fiharenandohan’ireo firenena mahantra sy an-dalampandrosoana noho ny kirizy ara-pihariana ateraky ny Covid-19, sy ho tosika amin’ny fampivoarana azy ireo io fihaonana IDA20 any Abidjan io.
lundi, 12 juillet 2021 19:47
Tsenaben'ny Fizahantany : Nihoatra lavitra ny novinavinaina ho avy ireo mpitsidika ny andiany faha 3
Fahombiazana ny Tsenaben'ny Fizahantany andiany faha 3, notanterahina teny amin'ny zaridainan'Antaninarenina – Antananarivo ny Alakamisy 8, Zoma 9 ary ny Sabotsy 10 jolay 2021 lasa teo. Nahatratra 8 535 ny isan’ny mpitsidika tonga, liana tamin’ireo tolotra samihafa momba ny fizahantany anatiny, raha toa ka teo amin’ny 7 000 no novinavinaina ho avy. Tsiahivina fa maimaimpoana ny fidirana tamin’ity hetsika ity. (Jereo Sary Tohiny)
DRAEP Betsiboka Maevatanana
Mifarana ny taom-pijinjana vary hasara, na vary be 2020-2021 aty Betsiboka. Nahatratra 6,6 taoninna isaky ny hekitara ny taham-bokatra ankapobeny ho an'ireo tantsaha nanaraka antsipirihany ny Haitao tekinika PAPRIZ, izay niarahana tamin'ny Tetikasa PAPRIZ. 8,10 taonina isaky ny hekitara ny taham-bokatra ambony indrindra, ary 4,2 taonina isaky ny hekitara kosa ny ambany indrindra azon'ireo Tantsaha izay nanao ny voly vary PAPRIZ taty amin'ny Faritra. Araka ny tomban'ezaka natao dia nahatratra 4 520 820 Ar isaky ny hekitara ny tombony afa-karatsaka ambony indrindra azon'ny tantsaha izay nanaraka ny tekinika PAPRIZ. Afa-po tamin'ny vokatra niakatra ireo tantsaha PAPRIZ amin'ny ankapobeany, ary maniry ny hanoy izany. Mahaliana tantsaha maro be ny tekinika PAPRIZ, ary maro ireo tantsaha no maniry ny hanaraka ny haitao tekinika PAPRIZ ao amin'ny Faritra. (Loharano : DRAEP Betsiboka Maevatanana) (Jereo Sary Tohiny)
Notanterahina nanomboka androany alakamisy 8 jolay teny amin’ny Zaridainan'Antaninarenina – Antananarivo ny Tsenaben'ny Fizahantany. Andiany fahatelo ny hetsika, izay karakarain'ny ministeran'ny Fitaterana, ny Fizahantany ary ny Famantarana ny toetry ny andro, miaraka amin'ny Ofisim-pirenena momba ny fizahantany (ONTM), ary haharitra hatramin'ny sabotsy 10 jolay ho avy izao. Natao indrindra hanohanana sy hampiroboroboana ny fizahantany anatiny, ary tafiditra ao anatin'ny paikady vaovao napetraky ny ministera nanomboka ny taona 2020 ny Tsenaben'ny fizahantany. Miantefa mivantana amin’ny rehetra, izay mpizahatany anatiny, avy eto an-toerana arak'izany ireo tolotra samihafa hampahafantarin'ireo mpandraharaha mpandray anjara rehetra, indrindra amin'izao ankatoky ny fialan-tsasatra lehibe izao. Natokana ho an'ireo mpianatra ny zoma 09 jolay amin'ny 09 ora ka hatramin’ny 10 ora maraina.
mercredi, 07 juillet 2021 18:50
Chiffre du Jour Air Madagascar
- Air Madagascar vol long courrier 1 avion Airbus A340 opérationnel600 salariés - Tsaradia vol intérieur1 ATR opérationnel3 ATR au sol300 salariés
Tontosa ny tontolo andron'ity sabotsy 3 jolay ity tao an-drenivohitr'i Vakinankaratra ny hetsika, “Journée Start Up”, hetsika ara-toekarena hanohanana sy hampahafantarana ireo tanora miantsehatra amin’ny fandraharahana nokarakarain’ny FIVMPAMA Vakinankaratra. Tanjona, raha ny nambaran’Atoa Razafiarison Andrianavalomanana, filohan’ny FIVMPAMA dia ny hanehoana sy ampahafantarana ireo tanora miantsehatra amin’ny fandraharahana ao Vakinankaratra, ahafahan’izy ireo mampahafantatra ny vokatra vokariny sy hifandraisany amin’ny mpiara-miombon’antoka ihany koa. Nambaran’ny filohan’ny FIVMPAMA ihany fa ny tanjon’izy ireo dia ny fampirisihana ny tanora mba handraharaha aorian’ny fianarany, fa tsy ny hitady asa satria nambarany fa 400 000 isan-taona ny olona tokony hiantsehatra eo amin’ny asa, kanefa eto Madagasikara dia tsy misy ny asa, ka ireo tanora no entanina mba hamorona asa hiasan’ny hafa fa tsy ny hiasa aman’olona foana.
vendredi, 02 juillet 2021 11:43
Madagasikara : Mangetaheta ambony volamena
Raha ny antontanisa navoakan'ny Agence nationale de la filière or (Anor) dia nanondrana volamena 2 423,4 kg (2,423 tonnes) ny taona 2019 i Madagasikara, raha 3 051,7 kg (3,052 tonnes) ny taona 2018, nahitana fidinany 20%. Ny tatitra nataon'ny UNCom Trade (United Nations International Trade Statistics Database), ivo-toerana mpanangona antontanisa eo anivon'ny firenena mikambana, dia nahatratra 200tonnes ny volamena nahondrana tany Emirats Arabes Unis, araka ny fanambaran'ny fadin-tseranana ao an-toerana, avy aty Madagasikara ny taona 2008-2016, izay 31.42tonnes ny taona 2009, ary 9.27tonnes ny taona 2017. Ny tatitra nataon'ny Transparency International kosa dia manambara fa mahatratra 15tonnes ny volamena mivoaka eto Madagasikara isan-taona raha ny tatitra ny taona 2018. Maro moa ireo loharanom-baovao manamafy fa nitohy hatrany izany fanondranana volamena izany nandritra ny fihibohana.
Mitetina 47 838.40 Euro androany alarobia 30 jona 2021 ny vidin'ny volamena 1kg eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha 4 568.13 Ariary ny 1 Euro, dia 218 532 030.19 Ariary izany ny kilao, na 218 532 Ariary ny graman'ny volamena. 160 000 Ariary eo no hakana ny 1grama any amin'ireo mpitrandraka, 5 000ar ny hetra sy haba alain'ny fanjakana, 5 000ar ny lany amin'ny fitaterana sy fanondranana azy. 30 000 Ariary izany no ifampizaran'ny mpanangona volamena, ny mpampiasa vola, ny mpanondrana sy ny mpandray azy any ivelany isaky ny grama. Fihariana sarotra, nefa ilana vola be ampiasaina izany ny volamena, nefa mamelona Malagasy efa ho 5 tapitrisa izay misehatra aminy. Mamelona ny Firenena satria 25% n'ny harin-karena dia ny asam-bolamena sy izay miankina aminy no entiny anatin'ny toe-karena malagasy.
Hiroso amin’ny fampiasana zotra an-dalamby hitaterana olona ny eto an-drenivohitra. Hisy zotra 2 (roa) amin’izany, dia ny Faritra Atsimo (corridor sud), izay manomboka eo Soarano PK0, mihazo Isotry, Ampefiloha, Soanierana, Ankadimbahoaka, Androndrakely ary mifarana eny Amoronakona PK12. Efa miatomboka ny asa mahakasika an’io. Ny zotra faharoa dia ny Faritra Avaratra (corridor nord), avy eny Alarobia mihazo an’Ankazomanga ary Soarano.